China 3D Eyes Popper Ukuntanta Ukudoba Popper Bait Hard Popper Lure ifektri abakhiqizi | UMfula Ichibi
I-3D Eyes Popper Ukudoba Okuntantayo Kokuthwebula Okunzima
Uhlobo Lure: Popper Hard Bait
Inhlanzi uqobo ayinakho ukukhanya, iyinto ekhanyayo, ikhombisa ukukhanya ngaphansi kwamanzi, futhi uketshezi olungaphakathi kwenhlanzi lubukeka njengesibindi senhlanzi.
Kumamitha ayi-10 wamanzi, iheha kakhulu ishubhu lokushaya
Zonke izinhlobo ezintsha zikhiqizwa egunjini lethu elisathuthuka elinezinhlelo zekhompyutha ze- "CAD".
2.Making sibonelo isikhunta
Umshini wokusika usika isikhunta ngokuzenzakalela kusuka kudatha ye-CAD.
3.Prototype kanye ne- test
Ukwenza iPrototype futhi uhlole izinto eziningi: ikhono lokusakaza, isenzo samanje, isenzo, bese sizama ukudoba futhi sibambe ezinye izinhlanzi.
4.Making isikhunta sensimbi
Ukwenza isikhunta sensimbi ngomshini wethu wokusika wensimbi othomathikhi ngenqubo eyindida.
5.Make imizimba epulasitiki nomhlangano
Ukwenza imizimba yeplastiki.Sibe sisebenzisa imishini yokushisela esebenzisa ubuchwepheshe be-wave obungaphezulu kokuhlanganisa imizimba ndawonye.
6.Paint futhi Hlola
Abaculi bachaza ngokunemba isandla sokuheha ngamunye ngamunye.Ngokugcina, sihlola ikhwalithi. Ngemuva kwalokho sinamathisela amasongo ahlukanisiwe, izingwegwe namehlo.
IDalian River Lake Fishing Tackle Co., LTD
IDalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd. ibhizinisi elihlanganisa i-R & D, idizayini, ukukhiqiza nokuthengisa. Sine iminyaka ecishe ibe ngu-10 yokuhlangenwe nakho okuyimpumelelo ekuhwebeni ngemikhiqizo eku-inthanethi.
Manje, imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka: ukuheha kwepulasitiki, udobo lwensimbi, isilingo se-spinner, imfanzi ye-squid, izinti zokukhanya kokudoba nokunye..Imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, i-professional r & D ithimba, ukuze thina embonini womabili amanani entengo nokusebenza komkhiqizo sincintisane kakhulu.
Ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha kungumsebenzi obalulekile kithina. Ngaphandle kokuklanywa ngokwezifiso nombala, singakwazi ukukhiqiza uze uneliseke ngakho. Nikeza ngesevisi ye-OEM
Ngokunikeza ikhwalithi yomkhiqizo ongcono, sisalokhu sigcina intengo ezingeni elincintisanayo kubathengi, ukuze babe namathuba amaningi nezinzuzo emakethe.
Ukulawulwa Kwekhwalithi Nezitifiketi
Ithimba lethu elivuthiwe lokulawula ikhwalithi lizohlola imikhiqizo ngaphambi kokuthunyelwa, kufaka phakathi ukuhlola umswakama, ukukhubazeka, imibhalo engemihle, ukupakisha, njll ngaphakathi kwemikhiqizo. Izitifiketi ze-ISO, SGS, CE, RTS, njll.
Ukupakisha:Iphakheji ejwayelekile yokuthekelisa, noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Inkokhelo: TT / Paypal / Trade Assurance njalonjalo
Indlela Yokuletha: Ngolwandle noma nge-Air nge-UPS / DHL / TNT / FEDEX njalonjalo
Langaphambilini I-7CM / 10.4G I-Minure Lure Lishing Minnow 5 Imibala Elukhuni ye-Bait Luminous Minnow
Olandelayo: I-Sales Newup Floating 7CM / 8G 9CM / 13G Ukudoba i-Bait Popper Ukuheha Okunzima
1. Ngingaba nentengo yemikhiqizo yakho?
Uyemukelwa. Pls zizwe ukhululekile ukusithumela i-imeyili lapha. Uzothola impendulo yethu emahoreni angama-24
2. Singaphrinta igama lethu le-logo / iwebhusayithi / lenkampani kumikhiqizo?
Yebo, ngicela ululeke ubukhulu nePantone Code yelogo.
3. Yini isikhathi sokuhola se-oda elijwayelekile?
Izinsuku eziyi-7-10 zoku-oda ubuningi zingaphansi kwe-1000pc; Ngobuningi obuningi, imvamisa izinsuku ezingama-20
4. Ngingathola isaphulelo?
Yebo, ngentengo yoku-oda eyodwa engaphezu kwe- $ 1000, sicela uxhumane nathi ukuze uthole intengo engcono kakhulu.
5. Ingabe uyayihlola imikhiqizo eseqedile?
Yebo, isinyathelo ngasinye sokukhiqiza nemikhiqizo eqediwe sizophuma ukuhlolwa ngumnyango we-QC ngaphambi kokuthumela.
1. Singumkhiqizi ochwepheshe wezinkuni ezikhanyayo zokudoba, futhi sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokuthekelisa.
2. Imikhiqizo yethu ithengiselwa amazwe amaningi kanye nezifunda zomhlaba, kubalwa u-3/5 wesabelo semakethe yomhlaba.
3. Singabantu ibhizinisi lokuqala ukuthuthukisa ifomula lomkhiqizo, endaweni ephambili embonini, ikhwalithi iqinisekisiwe ngokuphelele.
4. Sinamalungelo obunikazi bethu bokuhweba nophawu lokuhweba. Sisekela ukucutshungulwa okwenziwe ngezifiso.
5. Inzuzo encane yisimiso somkhiqizo wenkampani.
Ukuqashwa kweBass Poppers
9cm 10.68g ukudoba ukuyenga Wobbler kanzima Plastic 6 ...
Ukuheha Ukudoba Okuqinile I-VIB Metal Bait Sea Fish ...
Izigaba Eziningi Zokuheha Igazi Hook I-Minnow Bait ...
Ama-Wholesales New Style Multi-Segment 10cm / 15.61g ...
Umenzi wokuheha ipensela
Isitolo esidayisa yonke impahla High Quality 10.5CM 13.67G Isigaba H ...